ရှားပါးရှားပါး စားရင်းဝင် အပျိုကြီးဖြစ်ရခြင်းရဲ့ မဟာ အားသာချက် (၅) မျိုး…
လောကမှာ အပျိုကြီးဆိုတာ ရှားပါးစာရင်းဝင်တွေပါ။ လူတော်တော်များများကလည်း အပျိုကြီးဆိုရင် နောက်ပြောင်ဖို့၊ ကျီစယ်ဖို့လောက်ပဲ တွေးပြီး သူတို့မှာ ဘယ်သူနဲ့မှမတူတဲ့ အခွင့်အရေးတွေ၊ အားသာချက်တွေရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ မသိကြပါဘူး။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ အပျိုကြီးဖြစ်နေတဲ့ သူတွေပဲသိနိုင်တဲ့၊ ရနိုင်မယ့် အားသာချက်နဲ့ အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေကိုပါ။ ဘာတွေလဲဆိုတာ ကြည့်ရအောင်နော်။ (၁) ကလေးလို နေလို့ရတယ် အပျိုကြီးဆိုတာ […]
ဟဲဟိုးလေဆိပ်မှာ အမှတ်မထင်ပြန်ဆုံခဲ့ကြတဲ့ တချိန်က ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ မင်းသားနဲ့ မင်းသမီး…
တချိန်က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ မင်းသားမင်းသမီးတွေလို့ ဆိုရမယ့် လွင်မိုးနဲ့ နန္ဒာလှိုင်တို့ နှစ်ယောက်ကတော့ ဟဲဟိုးလေဆိပ်မှာ အမှတ်မထင် ဆုံတွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်တဲ့။ဗီဒီယိုဇာတ်ကားပေါင်းများစွာ တွဲဖက်ရိုက်ကူးထားပြီး အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ကြတဲ့အပြင် ယခုအချိန်မှာလည်း မိသားစုဘဝလေးတွေကို ကိုယ်စီတည်ဆောက်ထားနိုင်ကြပြီဖြစ်တဲ့ လွင်မိုးနဲ့နန္ဒာလှိုင်တို့ကတော့ တချိန်တုန်းက လိုက်ဖက်ညီလွန်းလှတဲ့ အနုပညာရှင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ နန္ဒာလှိုင်က ညောင်ရွှေကအပြန် ဟဲဟိုးလေဆိပ်မှာ လွင်မိုးနဲ့ […]
ဒီပုံလေးမြင်နေတာကြာပြီ အဓိပ္ပါယ် ကို အခုမှ ကောင်းကောင်းသိတော့တယ်….
ဒီပုံလေးမြင်နေတာကြာပြီ အဓိပ္ပါယ် ကို အခုမှ ကောင်းကောင်းသိတော့တယ် ပုံထဲက နှစ်ယောက်ကို ကြည့်ပါ ခင်ပွန်းဖြစ်သူက သူ့ဇနီးလက်ကို ကိုက်နေတဲ့ မြွေကို မမြင်ဘူး ၊ထို့အတူပဲ ဇနီးကလည်း ကျောက်တုံးကြီးခင်ပွန်းအပေါ် ပိနေတာကို မသိပြန်ဘူး ။ ဇနီးက ထင်မယ် “ငါ့မှာ မြွေကိုက်ခံရလို့ နာကျင်နေရတယ် သူ […]
ကျွဲဆည်ကန်ကားကွင်းကနေ ငှါးစီးလာတဲ့ ဆိုင်ကယ်သမားမှ ထိုးကြိတ်လုယက်ခံလိုက်ရလို့ပါ…
ဖျာပုံ မှ မန္တလေးသို့. ရာဇာအောင်ကားဖြင့် လိုက်ပါလာသူကျွဲဆည်ကန်ကားဝင်းရောက်..အမည် မောင်တိုးတက်အောင်နေရပ် ရပ်သာကျေးရွာ/ရေစကြိုမြို့နယ် မှဖြစ်ကြောင်းကားပေါ်မှအဆင်း ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားမှ ဘယ်သွားမှာလည်းမေးတော့ရေစကြိုပြန်မှာဟုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပြီး သီရိမန္တလာကားကွင်း သို့ သွားရမှာဟုပြောပြသော်လည်းဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားက သူလိုက်ပို့မယ် ဟုပြောဆိုကာ လမ်းခုလတ်တစ်နေရာတရားမဝင်ကားဂိတ်သို့ ပို့ခဲ့ကြောင်း၊ နားကပ်တစ်ရံ နှင့် ငွေတစ်သိန်း ငါးသောင်းကျော် ကို လူမဆန်စွာ […]
ရေနှစ်နေတဲ့ ကလေးကို ဘယ်သူမှသတိမထားမိဘဲ ဝင်ကယ်တဲ့ Deliver လေး
ချစ်ခင်လေးစားရတဲ့ စာရှုသူများခင်ဗျာ.. စာဖတ်ပရိသတ်များကို ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ ရုပ်သံဖိုင်လေးကတော့ အင်မတန်မှကို လူကြည့်များပြီး ၊ လူအများက ကောင်းမွန်တဲ့ မှတ်ချက်တွေပြုထားတဲ့ ရုပ်သံဖိုင်လေးလည်း ဖြစ်သလို ၊ ကလေးတွေကို (ဆော့ပါစေဆိုပြီး) ပစ်ထားပြီး ဖုန်းသာပွတ်နေတတ်တဲ့ မိဘတွေအတွက်လည်း သတင်းစကားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အခုတင်ပြမည့် ရုပ်သံဖိုင်လေးမှာ ကလေးငယ်လေးတွေဟာ မြစ်နံဘေးမှာ ကလေးသဘာဝ […]
မုန့်ဖိုးငွေ ကျပ်တစ်ရာပေးပြီး ပွေ့ချီကာ အခန်းထဲသို့ခေါ်ဆောင်ပြီး အရှက်အင်္ဂါအား မဖွယ်မရာပြုလုပ်….
အသက်​ ၂၈ နှစ်​ရှိသူအမျိုးသားက အသက်​ ၇ နှစ်​နှစ်​မပြည့်​သေးသည့်​ခလေးငယ်​အား မဖွယ်​မရာပြုလုပ်​….မိုးကောင်း၌ အသက်ခုနစ်နှစ်ခန့်မိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးကို မဖွယ်မရာပြုလုပ်သည့် အမျိုးသားတစ်ဦးအား အမှုဖွင့်အရေးယူ….ဇူလိုင် ၂၀ ကချင်ပြည်နယ် မိုးကောင်းမြို့၌ ဇူလိုင် ၁၉ ရက် ညနေပိုင်းက အသက်ခုနစ်နှစ်ခန့်ရှိ မိန်းကလေးငယ် တစ်ဦးကို မဖွယ်မရာပြုလုပ်ခဲ့သည့် အမျိုးသားတစ်ဦး အား အမှုဖွင့်အရေးယူထားကြောင်း […]
၂၀၂၀ မှ ဆက်လက်ရိုက်ကူးရတော့မယ့် “ဝတ်လဲတော်ရွှေပုဆိုး တန်းထိုးလို့ကြိုမယ်” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး
ကျေးလက်တောရွာက လူနေမှုဘဝပုံစံတွေကို ပိုင်နိုင်စွာ ရေးသားနိုင်တဲ့ နိုင်ငံကျော် စာရေးဆရာမကြီး ခင်ခင်ထူးရဲ့ နာမည်ကြီးဝတ္ထု တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ “ဝတ်​လဲ​တော်​​ရွှေပုဆိုးတန်းထိုးလို့ကြိုမယ်​” ဝတ္ထုကို မဖတ်ဖူးသူ မရှိလောက်ဘူး ထင်ပါတယ်။ “ဝတ်​လဲ​တော်​​ရွှေပုဆိုးတန်းထိုးလို့ကြိုမယ်​” ဝတ္ထုက မြင်းခြံနယ်က နတ်ပွဲတွေရဲ့ အကြောင်းနဲ့ နတ်ပွဲကိုသွားကြတဲ့ ကိုကျီးညိုနဲ့ မခင်နှောင်းတို့ရဲ့ အချစ်အကြောင်းကို ပုံဖော်ထားတဲ့ ချစ်စရာတော့ဓလေ့တွေ […]
ကွမ်းယာထဲ ထည့်စားကြတဲ့ နိုင်တီတူး (92) ဘူးပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့စာ
ကွမ်းယာထဲ ထည့်စားကြတဲ့ နိုင်တီတူး (92) ဘူးပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့စာ အရမ်းအန္တရာယ် များပါတယ် Do not swallow, Notafood product (မြိုမချရ၊ စားသောက်ကုန် မဟုတ်)၊ Do not use as ingredient in any […]
မိန်းကလေးတွေ သူတို့ချစ်သူကို ပြောလေ့ရှိတဲ့စကားများရဲ့ နောက်ကွယ်ကအဓိပ္ပာယ်များ…
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ဆိုတာ ခန့်မှန်းရခက်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေ ပြောနေတဲ့စကားတွေနဲ့ စိတ်ထဲကခံစားချက်တွေက ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတတ်လို့ပါ။ ဒါ့အပြင် တစ်ခုခုဆို ဒဲ့မပြောပဲ သွယ်ဝိုက်ပြီးပြောတတ်တာကြောင့်ပါ။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ မိန်းကလေးတွေ သူတို့ချစ်သူကိုပြောလေ့ရှိတဲ့ စကားတွေနဲ့ အဲ့ဒီ့စကားတွေရဲ့နောက်ကွယ်က အဓိပ္ပါယ်တွေပါ။ (၁) နင်နဲ့ငါပြတ်ပြီ ဒီလိုပြောတာကတော့ သင်အခုလုပ်နေတဲ့အရာကို ချက်ချင်းရပ်တန်းကရပ်ပြီး သူ့ကိုအာရုံစိုက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ တကယ်ပြတ်ရင်ပြတ် […]